China Solid Frame Double Crank Mechanical Press (usoro usoro) factory na suppliers | Daya
Ọdịdị dị elu (nrụrụ) nke ahụ na mmịfe 1/8000: obere nrụrụ na ogologo oge njigide.
Jiri pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki (integrated ụdị): gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ.
Ihe mmịfe ahụ na-ewe ụzọ ụzọ anọ na ụzọ asatọ, nke nwere ike iburu nnukwu ibu eccentric iji hụ na ndozi stampụ na-adịte aka ma kwụsie ike.
Ntugharị ntuziaka na-eme ka "mgbatị dị elu" na "usoro okporo ụzọ", na obere ejiji, nkenke dị elu, oge njigide ogologo oge, na ndụ ndụ ka mma.
Jiri mmanu mkpa mmanu mgbasa mgbasa mmanụ: ike nchekwa, nchedo gburugburu ebe obibi, na ọrụ mkpu mkpuchi akpaka, nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ stampụ site na ịhazigharị olu mmanụ.
A na-eji akwa ọla kọpa nke ọla kọpa ZQSn10-1 mee ọla kọpa, onye ike ya dị okpukpu 1.5 karịa nke ọla kọpa BC6 nkịtị. Ọ na - anabata ngwaọrụ nchebe dị oke egwu nke nwere ike ịchebe ndụ ọrụ nke ọkpọ ma nwụọ.
Standard Japanese SMC nrụgide na-achịkwa valvụ, lubricator, nza ikuku.
Japanesekpụrụ NSK nke Japanese na Japanese NOK akàrà.
Nhazi ọkọlọtọ nke German Siemens ihuenyo mmetụ na Siemens moto.
Nke gara aga: Nnennen Side Servo Press (Usoro STP)
Osote: Nnennen Side Mechanical Press (STF usoro)
Kwụ Ọtọ Side High Speed ​​Press N'ihi Motor Stator ...